မောင်ဝံသ ပြောချင်လွန်းလို့ | MoeMaKa Burmese News & Media
အောက်တိုဘာ ၇၊ ၂၀၁၂
12 Responses to မောင်ဝံသ ပြောချင်လွန်းလို့
Pn wara on October 7, 2012 at 3:04 pm
ဆရာ မောင်ဝံသ ကြားရတဲ့ သတင်းစိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ-အို-နာ-သေ ဆိုတဲ့ ဒုက္ခကတော့ လူတိုင်းကြုံရမည့် နိယာမ ဓမ္မသဘောပေမဲ့တတ်နိုင်သမျှ တရားဓမ္မ ကို အချိန်ရှိတိုင်း ပွားများပါလို့ ဘဲ ပြောပါရစေတော့- ဆရာ ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးတွေဖတ်ခဲ့တာ မဆလ ခေတ်ကထဲကပါ- အခုထိလဲ ဆရာ့ဆောင်းပါးဆို မလွတ်တမ်းဖတ်နေဆဲပါ-
ဒါကြောင့် ဆရာ့ ရဲ့ စာဖတ်ပရိဿတ်တဦးအနေဖြင့် ဆရာ့ကို ကျမ္မာစေကြောင်းလဲ မေတ္တာပို့ ပါတယ်။ ပြီးတော့ တတ်နိုင်သမျှလဲ ဆေးဖိုး ကူညီခြင်ပါတယ်။ ဘယ်လို ပို့ ပေးရမလဲဆိုတာ- လက်ခံမည့်သူနဲ့ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ကို အကြောင်းပြန်ကြားပေးပါ။ ဆရာ့ စာဖတ်ပရိတ်ဿတ် ရဟန်းတပါး-ဒါဝင်မြို့ - အော်စတေးလျား-
zaw on October 7, 2012 at 10:29 pm
၀မ်းနဲ ရပေမဲ့ လေးစားဂုဏ်ယူမဆုံးပါ။ သူရဲကောင်း အာဇာနည်များ ဟာဘယ်တော့မှသေရိုးမရှိပါ။
su su hlaing on October 8, 2012 at 12:13 am
ှဆရာ လူတိုင်းလူတိုင်း နောက်ဆုံးမှာ ဒီလမ်းကိုလျှောက်ကြရမှာပါ တရားသဘောမသိလို.တော.မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမဲ.ဆရာရယ် မြန်မာနိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာ ဆရာတို.လိုလူတွေ လိုအပ်နေတာပါ ဆရာတိုက်ပွဲ မှာအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ.စိတ်နဲ.တိုက်ပွဲ ၀င်ပေးပါဆရာ အောင်မြင်မှာပါ ပြီးတော. ဆရာ.အတွက် တရားဓမ္မ အလုပ်ကိုလည်းလုပ်ပါဆရာ ကျမတို.တတွေလည်းဆရာကျန်းမာပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးနေပါ.မယ်ဆရာ ။ ဆရာ.ကိုလေးစားလျှက်
Ohn on October 8, 2012 at 1:25 am
Sayar Khin Byar,
It is sad news to hear . The medical care could keep you healthy and living longer.
It is true sentiment of you that you said your friends should think of stopping smoking.
Please use you huge influence and power to stop young people from starting smoking all together. As you find now, even if you stop after starting it does not help. Not starting is the key.
As you are well aware, there is weakness across the country and across the spectrum of the people that is expressed in indulgence rather than discipline.
It does not matter what political system or leader is in the country so long as people are wasting their opportunities by smoking, drinking, gambling and visiting massage parlours. And there are more and more of these now than ever before. And young people.
Before you leave the fight in the midway, if you are to leave at all, please use your power to keep the young ones of the country from smoking and to observe Five Precepts which ever religion they are.
Htwe Htwe on October 8, 2012 at 4:44 am
since I heard that news have been pray & wish you well sooon!
magnolia on October 8, 2012 at 11:42 am
ဆရာ သတင်းစကြားကထဲက တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ကျမတို့အားလုံးနီးပါးအတွက်ဆရာလိုလူတွေအများ လိုအပ်နေသေးတဲံအချိန်မှာ အားတင်းထားပါအုံးဆရာ၊
ဘုရင် on October 8, 2012 at 1:57 pm
ဆရာ့အတွက်အလွန်ပဲဝမ်းနည်းမိပါတယ်။ဆရာကပြောဖို့ရေးဖို့နှုတ်ဆက်ဖို့အချိန်ရှိနေသေးတော့ အဆိုးထဲက အကောင်းလို့ပြောရမှာပါဆရာ။ရုတ်တရက်နှုတ်မဆက်ပဲထွက်ခွာသွားရတဲ့သူတွေထက်စာရင်တော်သေးတယ်လို့ ပြော ချင်တာပါ။ဆရာလိုတော်တဲ့ စာပေပညာရှင်တွေ နောက်ထပ်အများကြီးပေါ်ထွန်းနိုင်ပါစေလို့……
ko lay on October 8, 2012 at 2:36 pm
Saya Mg Wun Tha,
You are Brave Heart.
zulu zenith on October 8, 2012 at 2:45 pm
၀ိပဿနာ တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ပါဆရာ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ ဖြူစင်သန့်ရှင်းလာမှုတွေက ရောဂါဘယတွေကို များစွာကာကွယ် တွန်းလှန်နိုင်တဲ့အပြင် တရားသဘောအနှစ်သာရကို အမှန်တကယ်များ ပညာသိအဆင့် ထွင်းဖေါက်နားလည်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုမှ အရှုံးမရှိနိုင်တဲ့ကိစ္စမို့ အားထည့် လုပ်ကိုင်စေချင်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမှာ ကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုရှိစမြဲမို့… ဆရာ ကျန်းမာရေး တိုးတက်လာမှာပါ။
ဖွားနှောင်း on October 9, 2012 at 6:32 pm
ဆရာ သက်ရှည်ကျန်းမာဘေးကင်းကွာပြီး တရားတော်မြတ်ရဲ့ ငြိမ်းအေးခြင်းဓါတ်ဖြင့်ရပ်တည်ခိုင်မြဲ နိုင်ပါစေ။
aye mon win on October 10, 2012 at 12:35 pm
ဆရာ သက်ရှည်ကျန်းမာဘေးကင်းကွာပြီး တရားတော်မြတ်ရဲ့ ငြိမ်းအေးခြင်းဖြင့်ရပ်တည် နိုင်ပါစေ။
ဇော်ကို ပေါက်ခေါင်း on October 12, 2012 at 2:21 am
သတိရပါတယ် အရှင်ဘုရား ကျမ်းမာပါစေ